यस कारण सलमान खानको कार्यक्रम रोकियो ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
यस कारण सलमान खानको कार्यक्रम रोकियो ?
फिल्मी फण्डा । आउँदो फाल्गुनको २५ गते सलमान खान नेपाल आउने खबरले नेपाली मिडियाहरु रंगीरहेको अवस्थामा होलीकै दिन सलमानको कार्यक्रम स्थगीत भएको खबरले नेपाली मिडियालाई थप रंगीन बनायो । सलमान खानको कार्यक्रमको लागि सुरक्षा व्यवस्थादेखी सलमान खानको सेडुल र बस्ने प्रवन्ध सम्मको तयारी पुरा भईसकेको थियो । सलमान खानसँगै स्टेज सेयर गर्ने नेपाली कलाकारहरुले आफ्नो तयारी दु्रत गतिमा गरिरहेको छ । आवश्यक सबै प्रवन्ध मिलाईसकेको छ । नेपाल सरकार मातहतको सुरक्षा प्रवन्धसँग सम्बन्धित निकायले समेत अनुमति दिएको कार्यक्रम एक्कासी रोकियो । यसको वास्तविक कारण के हो त ?
यतिखेर नेपालमा रहेका सलमान खानका शुभचिन्तकहरु र आम नेपालीहरुले यसको उत्तर खोजिरहेका छन् । सलमान खानले आयोजक टिमलाई सञ्देश पठाउँदै आफु कार्यक्रममा नआउने खबर गरेको हो । कार्यक्रम स्थलमा बम पड्काउने हल्ला विप्लब समूहका केही कार्यकताहरुले विभिन्न ठाउँमा फैलाएपछि बाध्य भएर सलमान खान निकट स्रोतले कार्यक्रम रोक्न सञ्देश पठाएको हो । नेपालमा अनावशयक कार्यक्रम गर्न लागेको भन्दै विप्लब समूहले आयोजकलाई बारम्बार फोन गरि धम्की दिएका थिए । तर आयोजकले त्यसको बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम गर्ने निधो गरेका थिए ।
तर विहीवार आयोजकलाई मार्ने र सलमान खानको स्टेजमा आगो लगाउने तथा बम खसाल्ने धम्की दिएपछि कार्यक्रम रोक्नु परेको हो । करोडौंको टिकट बिक्री भईसकेको कारण आयोजक टिमले कार्यक्र रोकिएको वारे औपचारिक घोषणा गरिएको छैन । मिती सारेर कार्यक्रम गर्ने पहलमै आयोजक रहेको बुझिएको छ । तर नेपालमा देखिएका समस्याको वारेमा सलमान खानले मेसो पाईसकेपछि कार्यक्रम रोक्न सञ्देश पठाएको हो । विकाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपाल अुरक्षित छ भन्ने सोचलाई अन्त्य गर्ने हेतुले कार्यक्रम गर्न लागिएको थियो ।
आयोजक ओडीसी इन्टरनेसनले औपचारिक रुपमा शो स्थगित भएको घोषणा गर्न सकेको छैन । विभिन्न ब्राण्डका करौडौको प्रचार र आयोजकले खर्चेका रकम अब के हुने हो ? टिकट किनेर सलमान कुरेर बसिरहेका शुभचिन्तकले टिकटको रकम पाउने हो की हैन ? यो बिषयमा आयोजकले केही जानकारी गराएको छैन । सलमान खानको कार्यक्रम नेपालमा रोक्नु भनेको नेपाल अझै असुरक्षित छ भनेर विश्वसामु सञ्देश पठाउनु हो ।